Oghere na Teknụzụ Azụmaahịa? | Martech Zone
Monday, June 15, 2009 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga, abụ m onye nyocha na akwụkwọ akụkọ. Kwa izu, m na-achịkọta data sitere na usoro mmepụta na nkesa anyị wee rụọ ọrụ iji chọta ebe enwere oge ma ọ bụ ego iji chekwaa. Ọ bụ ọrụ siri ike mana enwere m ezigbo onye ndu na afọ iri m rụrụ ọrụ ebe ahụ, anyị belata mmefu ego anyị na-arụ ọrụ kwa afọ.
Ọ bụ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ dị ukwuu. Enwere m ọrụ maka mmefu ego nke ọtụtụ nde - yabụ ịchọta mkpofu anaghị ekwe ka ụlọ ọrụ ahụ chekwaa ego, o mekwara ka m nọrọ ego ebe a kacha chọọ ya. Ọ bụ ihe na-enye afọ ojuju inye ndị ọrụ ngwaọrụ na teknụzụ ha chọrọ iji mee ka ndụ ha dịkwuo mfe.
Chọta ohere na sistemụ na-eduga anyị mgbe niile Njikọ na sistemụ, mana ọ bụghị na usoro dị iche iche n'onwe ha. Ọtụtụ abalị, ndị na-ebi akwụkwọ na-agba ọsọ zuru oke, akụrụngwa ntinye enweghị ntụpọ, gwongworo na-aga nke ọma, ndị na-ebu ya gbasiri mbọ ike iwebata akwụkwọ ahụ n'ọnụ ụzọ gị. Otú ọ dị, n’agbata, ndị njem ebujuru, ahịrị ndị dara ada, pallel dara, ndị na-ebu gwongworo dara, ndị ụgbọala na-akwụsịkwa ndị na-ebu ha.
Na di na nwunye ọtụtụ iri afọ nke marketing nyocha ugbu a n'azụ m, ohere agbanwebeghị. Na ọrụ m, saịtị na-arụ ọrụ dị ukwuu, na akwụkwọ akụkọ na-aga na na na, na nchịkọta dị mma, blọọgụ na-eme ọfụma, a na-apịpụta oku na-arụ ọrụ, a na-agbakwunye ndu na Salesforce.
Otú ọ dị, isi ihe njikọ niile n'etiti na-efu efu. Akwụkwọ akụkọ ahụ anaghị arụ ọrụ na saịtị ahụ ma ọ bụ nchịkọta. The nchịkọta na-ejide akwa nke stats, ma ọ bụghị ụfọdụ ozi dị mkpa sitere na saịtị ma ọ bụ blog. The blog adọta nza nke okporo ụzọ, ma nsuso folks si blog ka ụlọ ọrụ na saịtị na-efu. N'ime Salesforce, anyị anaghị esochi isi okwu ndị butere ha, isiokwu ha gụrụ, ma ọ bụ CTA ha pịrị. Njikọ ndị ahụ agbajiri.
Ha anaghịkwa adị mfe idozi!
Ndị otu Azụmaahịa anyị maara ihe achọrọ, ha enweghị naanị akụrụngwa iji nweta ya niile na-arụ ọrụ ugbu a. Ekwetaghị m na nke a dị iche na ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ… anyị niile na-agba mbọ na enweghị isi n'ihi otu sistemụ anyị si ejikọ ma rụọ ọrụ. Ọ bụ agụụ nke m ruo ọtụtụ afọ, mana ejighị m n'aka na nnukwu mmepe ọ bụla abanyela n'ahịa ahụ.
Ka m na-ele anya n’ọdịnihu nke Teknụzụ Azụmaahịa, ekwetaghị m na ohere dị na ndị na-ajụ onwe ha… Ekwere m na ha dina na njikọ dị n’etiti ha.
Tags: nlebara anyaklout akaraidi nso ahia
PostPost ngwa mgbakwunye maka WordPress kwalite
Jun 16, 2009 na 12:42 AM
Ok ichoro m, na onu ogugu abuo. Nke mbu, odi nkpa iguta? Ọ́ bụrụkwanụ na i mere ihe i mere ma ghara ịtụ ihe, ọ̀ ka ga-agụ ya? Nke abuo, M stumped with “Salesforce” so Aga m aga chepụta na otu si…
Jun 16, 2009 na 8:52 AM
Ọ bụrụ na anyị agụghị ọnụ, kedu ka anyị si mara na ọrụ anyị na-enwe isi? Re: Salesforce - ọ bụ sọftụwia dịka onye njikwa mmekọrịta (ọnlaịnụ) nke ndị ahịa (CRM). Ihu ọma, ị nwere ike ịdebe ndu na ndị ahịa, ihe ọ bụla metụtara ha, ohere, wdg. Maka nzukọ nwere ngalaba dị iche iche ma ọ bụ ọtụtụ ndị ahịa ị nweghị ike icheta ha, CRM dị mkpa ka inwee ndị ahịa niile 'akụkọ ihe mere na mkpịsị aka gị.
Obi dị m ụtọ na ị jụrụ! Mgbe ụfọdụ m na-enweta a bit kwa geeky ebe a 🙂